कसरी तपाइँलाई मन पराउने कसैलाई भन्नुहोस् (र मित्रतालाई बिगार्नुहुन्न) - सम्बन्ध
तपाइँलाई मन परेको कसैलाई कसरी भन्नुहोस् (र मित्रतालाई खेर फाल्नुहुन्न)
के तिमीले पायौ कसैलाई क्रस ?
तपाईंसँग छ प्रेममा हिल मा टाउको को लागी उनीहरूसँग, जबसम्म तिनीहरू अझै छन्, जहाँसम्म तपाईंलाई थाहा छ, आफ्ना भावनाहरू बारे पूर्णतया अनजान।
हामी धेरै जसो हामीहरू निश्चित छैनौं किन हामी उनीहरु लाई कसरी महसुस गर्छौं भन्ने कुरा हाम्रो स्नेहको उद्देश्य बताउन हिचकिचाउँदछौं कसरी यसको बारेमा जान।
हामी आफुलाई विश्वास दिलाउँछौं कि उनीहरूले आफ्नै समझशक्तिमा उनीहरूलाई यो थाहा पाउनेछन कि उनीहरू वास्तवमै पहिले नै सचेत छन् तर उनीहरूलाई चासो छैन।
एरिक मर्फी एडी मर्फी छोरा
सामाजिक मिडिया र इन्टरनेट डेटि ofको युगमा, हामी मध्ये धेरै हामी कसरी महसुस गर्छौं भनेर अगाडि देख्न अझ बढी हिचकिचाउँछौं।
तर दुर्भाग्यवस, यस दृष्टिकोणको अक्सर अर्थ यो हुन सक्छ कि अचम्मका व्यक्तिहरू हामीलाई मार्छन् , ती जो झुण्डिएर जान्छन् छन् उनीहरूको भावनाहरु बारे इमानदार हुन इच्छुक।
क्लिच - हुनसक्छजीवन धेरै छोटो छ, र यदि तपाइँ सँधै चीजहरू आफैंमा आउन पर्खिरहनु भएको छ बाहेक बाहिर जानु र आफुलाई पक्रनु भन्दा तपाई प्रायः हराउनुहुनेछ।
यदि तपाईंले सिs द्वारा साँढे लिने र यसलाई शट दिने निर्णय गर्नु भएको छ भने, तपाईंले के सोचिरहनुभएको हुन सक्छ सहि बाटो यसको बारेमा जान्नु नै हो।
यदि तपाईं यसलाई अनौंठो बनाउने बारे चिन्तित हुनुहुन्छ वा विश्वस्त हुनुहुन्छ कि तपाईं डराउने जस्तो हुनुहुन्छ भने, तपाईं हुनु हुँदैन।
क्रिस्टल स्पष्ट कसैको लागि तपाइँको भावनाहरू कसरी बनाउने बारे केही सरल सुझावहरूको लागि पढ्नुहोस्।
१. यसलाई ठूलो सम्झौता नगर्नुहोस्।
सबै परिस्थिति फरक हुन्छन्, र त्यहाँ सबै प्रकारका कारणहरू छन् जुन तपाईलाई लाग्न सक्छ कि तपाईको भावनाहरु बारे स्वच्छ आउन गाह्रो छ।
तपाईं एक महत्वपूर्ण मित्रता बर्बाद को बारे मा चिन्तित हुन सक्छ, त्यहाँ exes सायद सम्मिलित हुन सक्छ, तपाईं सँगै काम गर्न सक्छ ... यी चीजहरू सीधा सीधा छन्।
तर यदि तपाइँ तपाइँको टाउकोमा यसलाई निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र के गलत हुन सक्छ भनेर केन्द्रित गर्दै, सायद केहि हुनेछ गलत हुन
याद गर्नुहोस्, यदि तपाईं यसको बारेमा सही तरिकाले जानुहुन्छ र यसबाट नाटक तयार गर्नुहुन्न भने, तपाईं कि त आफैं हुनुहुनेछ, मित्रको रूपमा, वा यसबाट मिति पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं यो धेरै निर्माण, तपाईं एक गिरावट को लागी आफैलाई स्थापित गर्दै हुनुहुन्छ। यदि, त्यो हो, तपाईले कहिले सम्म हिम्मत गर्नुहुन्छ यो वास्तवमै यसको बारे बाहिर स्वतन्त्र पारे पछि।
आफैलाई सम्झाउनुहोस् कि जे पनि हुन्छ, संसारले मोडिरहन्छ, र तपाईंको जीवन यस व्यक्तिको साथ वा बिना यस मा जान्छ।
२) व्यक्तिगतमा वा पाठ मार्फत गर्ने निर्णय गर्नुहोस्।
यसलाई व्यक्तिगत रूपमा गर्नु वा तिनीहरूलाई सन्देश पठाउन पूर्ण तपाईंको छनोट हो, किनकि दुबै तरीकाहरूका उनीहरूका फाइदाहरू छन्।
यदि उनीहरूलाई सोध्ने सोचले तपाईलाई डराउँछ र आमनेसामने कुरा एक टाढा टाढा हुन्छ भने, पाठ द्वारा त्यसो गर्नु एकदम राम्रो छ।
यो एक प्रतिलिपि बाहिर जस्तै महसुस हुन सक्छ, तर यो दृष्टिकोण को एक लाभ भनेको उनीहरूलाई तत्काल प्रतिक्रियाको आवश्यकता छैन।
यदि तपाइँका भावनाहरू उनीहरूलाई सम्पूर्ण आश्चर्यको रूपमा आउँदैछन् भने, सन्देश प्राप्त गर्नुको मतलब तिनीहरूसँग सोच्न थोरै समय हुन्छ, जुन हुन सक्छ हो को संभावना बढाउनुहोस्।
जो lil durk प्रेमिका हो
अर्कोतर्फ, यदि तपाईंलाई थाँहा छ कि सन्देश पठाउँदा तपाई आफ्नो फोनमा चिपकाउनुहुन्छ र थोरै पागल हुनुहुनेछ जब सम्म तपाई अन्ततः जवाफ प्राप्त गर्नुहुन्न… आफूलाई त्यस मार्फत नबनाउनुहोस्!
यो व्यक्तिगत रूपमा गर्न को लागी एक कडा तर्क पनि छ। जब यो मुटुको कुरा आउँदछ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि कसैको प्रतिक्रिया र शारीरिक भाषा पढ्न सक्षम हुनु, र तिनीहरूलाई तपाइँको पढ्नको लागि सक्षम गर्न को लागी।
उनीहरूको अनुहारमा भन्नुको मतलब यो पनि हुन्छ, एक पटक तपाईं यो गर्न साहस उठ्नुभयो भने, तपाइँलाई एक तरिका वा अर्को थाहा छ।
कुन मार्ग कुन हिसाबले तपाईंको लागि उत्तम हो तपाईंलाई थाहा छ।
Your. तपाइँको क्षण छान्नुहोस्।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई पाठ पठाउने निर्णय गर्नुहुन्छ, तब (बिना नै) पनि stalker-esque) निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक क्षणमा त्यसो गर्नुहुन्छ जब तिनीहरू स्वतन्त्र हुने सम्भावना हुन्छ, बाहिर र बारेमा भन्दा।
उनीहरू पहिलो कसरी हुन्छन् सोध्नुहोस्, र यदि उत्तर छ कि तिनीहरू तनावग्रस्त वा थकित छन् भने, यसलाई अर्को समयको लागि छोड्नुहोस्।
यदि तपाईं व्यक्तिगत रूपमा गर्नुहुन्छ भने, यो गर्नुहोस् जब यो तपाईं दुईजनाको हो र तपाईं बसेर वा कतै शान्त भई हिड्दै हुनुहुन्छ। एक क्याफे वा पार्क आदर्श छ।
It. यो ASAP गर्नुहोस्।
तपाईं पहिले नै लामो समय देखि यो व्यक्तिमा क्रस भइरहेको हुन सक्छ। जे होस्, यदि यो नयाँ चीज हो भने, आफैंको पक्ष लिनुहोस् र आफैंलाई आफ्नो दु: खबाट टाढा राख्नुहोस्!
जति सक्दो चाँडो गर्नुको मतलब यो हो कि यदि उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेनन् भने, आफ्नो भावनालाई पछि बढाउनु अघि तपाईले त्यसलाई बुडमा डुबाउन सक्नुहुन्छ।
र यदि तिनीहरूले हो भने, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं उनीहरूको कम्पनीमा रमाइलो गर्न चाँडै भन्दा पछि सक्नुहुनेछ।
तपाइँलाई थाहा छैन कि भाग्यले तपाइँको लागि भण्डारमा के लिएको छ, त्यसकारण अनमोल समयलाई तपाइँको औंलाहरूमा चिप्लन नदिनुहोस्।
Yourself. यो आफैंमा राख्नुहोस्।
तपाईं थोरै नै ओब्जेसन गर्दै हुनुहुन्छ, तर भित्री रूपमा यसको लागि उत्तम प्रयास गर्नुहोस्।
सबै तरिकाले, तपाईको नजिकका साथीहरूलाई भन्नुहोस्, तर हुनसक्छ तपाईले आफुलाई मन परेको कुनै पनि आपसी साथीहरुलाई बताउनु हुँदैन।
कसैसँग कुरा गर्नुको साटो जो यस व्यक्तिलाई कत्तिको सुन्छौं सुन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई भन्नुहोस्!
6. आफैंलाई आत्मविश्वास बढाउनुहोस्।
यदि तपाईं अझै आफ्नो भावनाहरू स्पष्ट बनाउन अनिच्छुक हुनुहुन्छ भने, यो हुन सक्दछ कि तपाईंलाई चाहिने थोरै अहंकार बढावा हुन सक्छ।
हामी अरूको तुलनामा हामी आफैंमा धेरै आलोचनात्मक हुन्छौं, त्यसोभए किन तपाईको सबैभन्दा राम्रो साथीलाई तपाईको आत्म-सम्मानले थोरै कष्ट भोगिरहेको छ र उनीहरूलाई तपाईका बारेमा माया गर्ने सबै कुरा बताउन दिनुहोस्।
आफैलाई सम्झाउनुहोस् कि, यो विशेष व्यक्ति तपाईंप्रति आकर्षित छ वा छैन, तपाईं एक अविश्वसनीय व्यक्ति हुनुहुन्छ जो योग्य हुनुहुन्छ - र फेला पार्नुहुनेछ - प्रेम।
Just. पहिलो मिति मा उनलाई सोध्नुहोस्।
जबसम्म तपाईं बीचको अवस्था अल्ट्रा-जटिल हुँदैन, राम्रो समाचार यो हो कि तपाईंले कुनै पनि प्रकारको रोमान्टिक घोषणाको साथ तपाईंले उनीहरूलाई आफ्नो हृदय पोखाउनु आवश्यक पर्दैन।
तपाइँले तिनीहरूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने बाहिर राख्नु भएकोले मात्र उनीहरू डराउँदछन्, विशेष गरी यदि यो उनीहरूको लागि निलोबाट पूरै बाहिर आउँदैछ।
एक मिति, तथापि, धेरै कम डरलाग्दो छ।
याद गर्नुहोस्, तपाईंले यी भावनाहरू अहिलेको लागि विकास गरिसक्नु भएको छ, तर उनीहरूले तपाईंलाई पनी पनी जाने सुझाव नगरेसम्म त्यस्तो सोचेनन् होला।
यदि चीजहरू राम्रोसँग जान्छन् भने तपाईसँग प्रशस्त समयहरू छन् आफ्नो प्रेम स्वीकार लाइन तल, जब तिनीहरू यसको लागि बढी तयार हुन सक्छन्, यसलाई ग्रहण योग्य वा यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न पनि।
यस चरणमा तपाईलाई उनीहरूबाट आवश्यक सबै साधारण हो वा होईन।
मसँग कुनै सपना वा लक्ष्य छैन
एक रमाईलो निमन्त्रणा जसले यो स्पष्ट पार्दछ कि तपाईंले मितिमा उनीहरूलाई सोधिरहनु भएको छ - सायद तपाईंले क्याजुअल च्याट गरिसके पछि - आवश्यक छ।
को रेखा को साथ केहि, 'के तपाई साथीहरू भन्दा धेरै केहि समय रात्रिभोज लिने कल्पना गर्नुहुन्छ?'
यो कुराकानी गर्नको लागि पर्याप्त छ कि तपाईंले तिनीहरूलाई मनपराउनुहुन्न वास्तवमा तपाईंले यसको हिज्जेको आवश्यकता बिना नै।
यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू सजिलैसँग र अनौपचारिक रूपमा बोल्न सक्छन् र यसलाई हाँस्न सक्छन्, यदि उनीहरू रुचाउँछन्, र तपाईं दुबै मा सार्न र कुनै अप्ठ्यारो बिना साथीहरू रहन सक्नुहुन्छ।
Things. कुरा स्पष्ट पार्नुहोस्, तर सटीक शब्दहरूमा ध्यान नदिनुहोस्।
यहाँ सम्झनको लागि दुईवटा चीजहरू छन्। सर्वप्रथम, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले छान्नुभएको भाषाले यो स्पष्ट पार्दछ कि तपाईं उनीहरूलाई मित्रैलो कुराकानीको लागि कफीको लागि सोध्नु भएको छैन। तपाईं तिनीहरूलाई गलत प्रभाव अन्तर्गत तपाईंको निमन्त्रणा स्वीकार गर्नबाट जोगिन चाहनुहुन्छ।
यदि तिनीहरूले तपाईंको अभिप्रायलाई गलत अर्थ लगाउँदछन् भने, चीजहरू अनौंठो हुनेछन् जब उनीहरूले अन्ततः महसुस गर्छन् कि तपाईंहरू दुई बिल्कुलै फरक पृष्ठहरूमा छन्। शब्द 'मिति' प्रयोग गर्नाले सधैं मद्दत गर्दछ।
अर्कोतर्फ, तपाई के भन्न लाग्नु भएको छ त्यसमा ध्यान नदिनुहोस् र केहि फैन्सी लाइनको साथ आउन नखोज्नुहोस्। के चलचित्रमा राम्रो लाग्दछ वास्तविक जीवनमा विरलै काम गर्दछ। सरल जति राम्रो छ।
Yourself। आफैलाई एक म्याद दिनुहोस्।
यदि तपाईं तिनीहरूलाई केहि समयको लागि बाहिर सोध्नु गरिरहनु भएको छ र बहाना बनाइरहनुभएको छ भने, वास्तवमा डेडलाइन सेट गरेर आफूलाई नज दिनुहोस्।
हामी ईमान्दार हुनुपर्छ, त्यो 'उत्तम' क्षण तपाईंले पर्खिरहनु भएको छ हुनसक्छ आफैंलाई प्रस्तुत गर्न कहिले पनि आउँदैन। त्यसोभए तपाई केवल आफ्नो क्षण छान्नु पर्छ र यसको लागि जानुहोस्।
यो हप्ताको अन्त्य हो, महिनाको अन्त्य हो, वा तपाईंको जन्मदिन अघि, आफैलाई समय बर्बाद हुन नदिनुहोस्।
१०. त्यसोभए, तिनीहरूलाई अलिक स्थान दिनुहोस्।
यदि तिनीहरूले हो भने र तपाईं एक मिति मा सहमत गर्नुभयो भने, के भयो को पचाउन तिनीहरूलाई एक सानो स्थान दिनुहोस्।
तपाइँको मिति को विवरणहरुमा दृढ हुनको लागि सबैलाई एक पाठ पठाउनुहोस्, तर तिनीहरूलाई तथ्य दिनुहोस् कि तपाईंले आफुले तिनीहरूलाई मनपराउनु भएको कुरा भन्नुभएको छ, र उनीहरूलाई तपाईंको भेटको बारेमा उत्साहित हुने मौका दिनुहोस्!
११. अस्वीकृतको लागि तयारी गर्नुहोस्।
जबकि यो सँधै राम्रो छ आशावादी हुनुहोस् , यी जस्तो अवस्थामा, पछाडि दस्तकको लागि तयार हुन यो सधैं समझदार हुन्छ।
यदि तपाईं तिनीहरूसँग साथी हुनुहुन्छ भने, यो स्पष्ट पार्नुहोस् कि तपाईंको मित्रताले तपाईंको लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ, र अन्तिम चीज तपाईं गर्न चाहानुहुन्छ यसलाई अनौंठो बनाउँदछ।
अर्को हप्तामा चीजहरू थोरै तनाव हुन सक्छन् यदि तिनीहरूले होईन भन्छन् तर, तर यदि तपाईं सावधान हुनुहुन्छ भने उनीहरूको व्यवहार गर्ने तरिका परिवर्तन नगर्नुहोस् , तपाईं दुबै चाँडै तपाईं पहिले भएको सम्बन्धमा फिर्ता पर्नु पर्छ।
निश्चित गर्न कोसिस गर्नुहोस् तपाईं हुनुहुन्छ एक जो होईन कि जसले चीजहरू अनौंठो बनाइरहेको छ, यदि तपाईंले यसलाई अनजानमै गरिरहनु भएको छ भने।
त्यहाँ छन्, सबै पछि, समुद्रमा प्रशस्त मात्रामा माछा र धेरै महान प्रेमहरू जुन तपाईंले अझै भेट्नु भएको छैन, र मित्रताको मोल गर्नुपर्छ।
जतिसुकै यो जस्तो लाग्न सक्छ जब तपाईं यसको बाक्लो ठाउँमा हुनुहुन्छ, अस्वीकार प्रायः संसारको अन्त्य होइन, त्यसैले चीजहरूलाई परिप्रेक्ष्यमा राख्नको लागि उत्तम गर्नुहोस्।
कहिलेकाँही यसले कसैलाई तपाईको डरको बारेमा कुरा गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ र कसरी तपाइँलाई मनपर्दो व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्ने एक खेल योजना प्राप्त गर्न सक्छ। यहीँमा सम्बन्ध नायक आउँदछ। कुनै एक सम्बन्ध सल्लाहको लागि अब उनीहरूको सम्बन्ध विशेषज्ञहरूसँग अनलाइन कुराकानी गर्नुहोस्। केवल
तपाईं आफूले मनपराएको कसैलाई यो नगरी कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
जहाँसम्म यो स्पष्ट रूपमा भन्नु उत्तम तरीका हो, तपाईले अर्को व्यक्तित्वलाई सुझाव दिन सँधै फरक वाक्यांश प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईको कम्पनीमा साँच्चिकै रमाईलो हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने, 'म तपाइँको कम्पनीलाई साँच्चिकै रमाईलो गर्दछु' भन्नु राम्रो स्थान हो।
के गर्ने जब तपाइँ तपाइँको घरमा बोर हुनुहुन्छ
तपाईंले प्रयोग गर्न सक्नुहुने अन्य वाक्यांशहरू: 'म तपाईंसँगै ह्याँ out्ग गर्न मनपराउँदछु,' 'म तपाईको वरिपरि हुँदा सँधै रमाइलो गर्छु,' 'तपाई वरिपरिको मजा हुनुहुन्छ,' र 'तपाईको वरिपरिको वातावरण सहजै महसुस गर्छु।' '
तपाइँ कसैलाई मनपर्‍छ भनेर तपाइँ कसरी सint्केत दिन सक्नुहुन्छ?
यदि तपाईं अझै आफुलाई कस्तो लाग्छ भनेर भन्न तयार हुनुहुन्न भने, त्यहाँ अन्य तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यो व्यक्तिलाई सुराउन सक्नुहुनेछ कि तपाईंलाई मन परेको छ। एउटा उत्तम तरिका तिनीहरूलाई वास्तविक प्रशंसा दिनु हो। यो तीनिहरु लाई राम्रो भन्न को लागी गरीरहेको छ आज उनीहरु लाई राम्रो लाग्छ।
वा तपाइँ विशेष केहिमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ जस्तै तिनीहरूको नयाँ जुत्ता वा तिनीहरूको कपाल स्टाइल हुने तरीका। बस यी अनौपचारिक कुराकानी मा फेंक र यसलाई बाहिर एक ठूलो सम्झौता नगर्नुहोस्।
के तपाईं सम्बन्धमा हुँदा उनीहरूलाई मन पराउने कसैलाई बताउनु पर्छ?
यदि तपाईंसँग पहिले नै जोडीएको कसैसँग क्रश छ भने, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त नगर्नु यो उत्तम हो। यो कतै पनि नेतृत्व गर्न असम्भव छ र तपाइँ वास्तवमै उनीहरूलाई साथीको रूपमा गुमाउने जोखिम लिनुहुन्छ किनभने उनीहरू आफुलाई वरिपरि हुँदा अत्यन्त असहज महसुस हुन्छ जस्तो लाग्छ कि तपाइँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ र एक साथी पनि रहेको छ। यो उनीहरूलाई विश्वासघात जस्तो लाग्न सक्छ वा उनीहरूले तपाईलाई अगुवाई गरिरहेको जस्तो छ।
तपाइँ कसरी मन पराउनुहुन्छ कसैलाई अस्वीकार नगरी भन्न सक्नुहुन्छ?
माफ गर्नुहोस्, तर अस्वीकृति एक सम्भावना हो जब तपाईंले कसैलाई उनीहरूको बारेमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ बताउनुभयो। अवश्य पनि, तपाइँ प्रतिक्षा गर्न को लागी तपाइँ पनी निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तिनीहरूले तपाइँलाई पछाडि मन पराउँछन्, तर त्यो दिन कहिँ पनि आउन सक्दैन किनभने तपाइँ चिन्हहरू पढ्नुहुन्न वा किनभने तपाइँ आफ्नो प्रवृत्तिमा शंका गर्नुहुन्छ।
केवल बाहिर आएर यसो भन्नु उत्तम हुन्छ यदि यसको मतलब अस्वीकृत पनि भएन, किनकी कम्तिमा पनि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
तपाइँ कसरी तपाइँ तपाइँको पाठ लाई रुचि तपाइँको क्रश बताउन सक्नुहुन्छ?
बाहिर आउँदैछ र केवल तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर बताउँदै एक विकल्प छ - र त्योमा राम्रो। अन्यथा, तपाइँ जहिले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई उनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ उनीहरूलाई हेर्नको लागि कति प्रतिक्षा गरिरहनु भएको छ, वा उनीहरूसँग तपाईंले कति रमाइलो गर्नुभयो।
पाठ कुराकानी कहिले पनि अनुहार भन्दा स्पष्ट रूपमा स्पष्ट हुँदैन, त्यसैले तपाईको सन्देशको अर्थ अर्को व्यक्तिले गलत अर्थ लगाउन सक्छ।
तपाईं आफूले मनपराएको कसैलाई कसरी गोप्य रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ?
ठिक छ, तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्छ कि किन तपाईं कसैलाई लुकाएर भन्न चाहानुहुन्छ कि तपाईंलाई मन परेको छ। तपाइँ के सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ त्यसबाट प्राप्त गर्नुभयो? अवश्य, तपाइँ यो कार्ड एक गोप्य प्रशंसकबाट हो भन्दै फूलको गुच्छा पठाउन सक्नुहुनेछ, तर यदि उनीहरूलाई यो थाहा छैन भने त्यो को हो, उनीहरूलाई कसरी महसुस गर्ने भनेर थाहा छैन।
यद्यपि यदि तिनीहरूले शंका गरे तपाईं उनीहरूलाई मन पराउनुहुन्छ, यदि उनीहरूलाई थाहा छ कि कसले उपहार पठायो भनेर, उनीहरूले यसमा कार्य गर्न सक्षम हुदैनन्, यदि तिनीहरू यही आशा गर्दै थिए कि उनीहरूले गर्छन्।
तपाईं कसैलाई कसरी सोध्न सक्नुहुन्छ यदि तिनीहरूले तपाईंलाई स्पष्ट नभएको मन पराउँछन्?
यदि तपाइँले उनीहरूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्नुभन्दा अघि कसैले तपाइँलाई कस्तो महसुस गर्दछ भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने, तपाइँ जहिले पनि केही भन्न कोशिस गर्न सक्नुहुन्छ, 'हामी दुई जनालाई बाहिरै राख्नु राम्रो हो, होइन र?'
उनीहरूले सायद एक वा अर्को तरिकाले हो भन्दछन् किन कि तिनीहरूले तपाईलाई दु: खी गर्न चाहँदैनन्, तर यो उनीहरूको भनाइको रूपमा हो र तिनीहरूको अनुहारको हेराईले तपाईंलाई उनीहरूले के महसुस गर्दछन् बताउँछ।
यदि तिनीहरूको अनुहारमा ठूलो मुस्कान छ र उनीहरूको आँखा उज्यालो देखिन्छ भने, यो राम्रो संकेत हो कि तिनीहरूले तपाईंलाई जस्तो तपाईंलाई थोरै थोरै गरे। यदि तिनीहरु ब्लश गर्छन् भने, यो अझ राम्रो संकेत हो कि उनीहरूले तपाईलाई मन पराउँछन्।
Ste चरणमा अस्वीकृतिको डरलाई कसरी जित्ने
निश्चित कसैको लागि तपाइँको प्रेम अनुचित छ (र यसको बारे के गर्ने) चिह्नहरू।
Sign चिन्हहरू केटोले तपाईंलाई मन पराउँछ तर यो स्वीकार गर्न डराउँछ
कसरी भन्न सकिन्छ यदि केटीले तपाईंलाई मन पराउँछिन्: २ Clear स्पष्ट संकेतहरू उनी तपाईंभित्र छिन्
१ Sign संकेतहरू तपाईले वास्तवमा केटालाई मन पराउनुहुन्छ: आफ्ना भावनाहरू कसरी पक्का गर्ने
जब एक नयाँ सम्बन्ध प्रविष्टि गर्दै, यी7अवास्तविक अपेक्षाहरू त्याग्नुहोस्
हामी कहिले प्रेममा पर्छौं?
आफ्नो बारेमा तीन सुपर कूल तथ्य लेख्नुहोस्
तपाइँको हानि को लागी माफी माग्ने तरिका
डोमिनिक सीढी मिलान को हिरासत
एक केटी तपाइँ मा रुचि छ संकेत